Ha ka baqin guuldarro. Wax ka baro oo sii wad. Adkeysi waa waxa abuura heer sare. - qarsoodi - Quotes Pedia
Ha ka baqin guuldarro. Wax ka baro oo sii wad. Adkeysi waa waxa abuura heer sare. - Qarsoodi
Guul darradu waa tiirka guusha. Guuldarrooyin la'aan, way kugu adkaan doontaa inaad ku raaxaysato dhadhanka guusha. Hagaag, ma jiraan dad sidan oo kale ah oo aan arkayn fashil ugu yaraan noloshooda. Si loo noqdo mid saxan, ma jiro jiritaanka nolol la’aan guuldareys. Marka, waxay noqon doontaa ikhtiyaarka kuugu fiican inaad guuldareysato qalabkaaga guusha.
Waan ognahay in guuldaradu ay jebiso qalbigaaga oo ay kuu maamusho inaad u maleynaysid in wax walba dhammaadeen Si kastaba ha noqotee, waa mid ka mid ah macallimiinta ugu fiican noloshaada. Waxaa jira casharo kala duwan oo noloshaada ah oo aad wax ku baran karto oo keliya haddii aad goob joog u ahayd guuldarro.
Marka, waad arki kartaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee kaa caawin doona inaad wax badan ka barato nolosha. Sidaa darteed guuldaradu waa lama huraan markay tahay guusha noloshaada.
Waxa kale oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa iyadoo aan loo eegayn xaaladdu xaaladdu, waa inaadan waligaa joojin. Waa inaad sii wadataa noloshaada. Waxaa jiri doona xaalado marka aad dareemeyso inaad joogsaneyso, laakiin waa inaadan joojin.
Waa inaad maskaxdaada ku haysaa hal shay in adkeysi waa furaha guusha. Waa inaad Noqotaa Noloshaada Nolol Maadaama ay Tahay Wadada kaliya ee kugu horseedi doonta hadafkaaga. Sidoo kale, waxay kordhin doontaa kalsoonidaada waxayna kaa caawin doontaa inaad sii wadatid noloshaada. Ka sokow, waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu gaaro farxadda maadaama ay tahay waxa ugu muhiimsan.
Marka, si kasta oo ay wax u dhacaan, waa inaadan lumin dhiiranaantaada. Ama haddii kale way kugu adkaan doontaa inaad gaadho halkaad rabto. Haddii aad naftaada ka joojiso isku dayga, ma jiro dariiq aad ku gaarto yoolkaaga. Sidan ayaad u arkaysaa waxba kama jiraan laakiin guuldarro.
Xigashooyin cabsi badan
Ha ka Cabsan Xadgudubka
Qodobka ugu sarreeya
Guul darrooyinka sawirada
Cabsida Quusure Quotes
La soco xigashooyinka
Ku sii wad Oraahda Ku Saabsan Hadafka
Ka Baro xigashooyinka khaladaadka
Kajawaabida xigashooyinka Fashilka
Xigashooyinka dhiirigalinta joogtada ah
Qodobbada joogtada ah
Xigashooyinka Guusha iyo Guuldareysiga
Xigasho ku saabsan Fashil
Xigashooyin ku saabsan Guuldaro iyo Bixin la’aan
Xigashooyin ku saabsan cabsida guuldarada
Xigashooyinka ku saabsan barashada cilladaha qaladka
Xigasho ku saabsan Jiritaanka iyo Go'aaminta
Raali-gelinta micnaheedu maahan had iyo jeer inaad qaldantahay qofka kaleuna sax yahay. Kaliya waxay ka dhigan tahay inaad qiimeyso xiriirkaaga in ka badan lacagtaada. - Qarsoodi
Ego waa kalmad saddex geesood ah oo baabiin karta eray weyn oo dufan leh sida xiriir ah. Is fahan la’aan…
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad naftaada iska fogeyso oo aad keligaa abuurto waqti, si aad ula xiriirto qofka aad runtii tahay, isla markaana naftaada u ogaato waxaad nolosha ka rabto. - Qarsoodi
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad naftaada iska dhigto oo aad keligaa abuurto waqti, si aad ula xiriirto cidda aad runtii…